अर्थ Rajdhani News अर्थ
काठमाडौँ। सुनको भाउ तोलाको एक लाख नजिक पुगेको छ। आज तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको
साउन १८ गते, २०७७ १०:५० मा प्रकाशित
काठमाडौँ। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। आफूलाई बझाङबाट एक व्यक्तिले फोन गरेर जहाँ भेट्यो त्यही ‘टाउको काट्छु’ भन्दै धम्की दिएको भट्टले बताएका छन्। एमसीसीको पक्षमा आफूले बोल्दै
काठमाडौँ। सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आज तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेर ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो भाउ अहिलेसम्मकै महँगो हो।
साउन १५ गते, २०७७ १०:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से २३.३६ अङ्कले घटेर एक हजार ४३१.५२ मा रोकिएको छ। यस्तै सेन्सेटिभ
साउन १५ गते, २०७७ ०६:४१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ। बुधबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बुधबार छापावाल सुन तोलामा ९८ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार हुँदै नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। मङ्गलबार छापावाल सुन तोलामा ९८
साउन १४ गते, २०७७ ११:३१ मा प्रकाशित
बारामा गत आर्थिक वर्षमा रु १ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित विकास लगायत ५० वटा कार्यालयबाट सो रकम खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको कोष
साउन १३ गते, २०७७ २१:१९ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन थप सहजीकरण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । वित्तीय स्थिरताका लागि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने वा प्राप्ति
साउन १३ गते, २०७७ ०९:०४ मा प्रकाशित
१६ प्रतिशतले व्यापार घाटामा कमी
गत आर्थिक वर्ष २०७६,०७७ मा १६ प्रतिशतले व्यापार घाटामा कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सो आवमा ११ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। अघिल्लो आव २०७५,७६ मा
साउन ११ गते, २०७७ २०:१९ मा प्रकाशित
अब हीरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरको पनि मूल्य तोकिने
काठमाडौँ। नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासङ्घले हीरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरको मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ। हालसम्म सुन तथा चाँदीको मूल्य निर्धारण हुने भए पनि बहुमूल्य हीरा तथा पत्थरको मूल्य कति
साउन १० गते, २०७७ १६:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं। पछिल्लो समय सुनको मुल्यले दिनानुदिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ। आज शुक्रबार पनि स्थानीय बजारमा सुनको मुल्यले अर्को नयाँ रकेर्ड कायम गरेको छ। आज सुनको मुल्य तोलामा १३
साउन ९ गते, २०७७ ११:१० मा प्रकाशित
प्रथम बीमा शुल्क आम्दानीमा युनियन र नेपाल लाईफको छलाङ, एलआईसी नेपाल र नेशनल पछ्याउँदै
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रथम बीमा शुल्कको आधारमा युनियन लाईफले तीव्र गतिको प्रगति गर्दै अघि बढेको देखिएको छ । पुराना कम्पनीहरुलाई पछि पार्दै
साउन ९ गते, २०७७ ०६:२७ मा प्रकाशित
नियम विपरीतको भुक्तानी तत्काल असुल गर्न निर्देशन
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयबाट नियम विपरीत भएको भुक्तानी तत्काल उसुल÷उपर गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित समिक्षात्मक बैठकमा आज मन्त्री लेखबहादुर
साउन ८ गते, २०७७ १९:४३ मा प्रकाशित
नेपालमा सुनचाँदीको मुल्यले रेकर्ड तोड्यो आजको मुल्य कति?
काठमाडौँ। बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्यले रकेर्ड तोडेको छ। आज सुनको मुल्य तोलामा १३०० रुपैयाँले बढेर हालसम्म नयाँ विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आजका लागि सुनको मुल्य प्रतितोला
साउन ७ गते, २०७७ ११:०७ मा प्रकाशित
आजदेखि हजारको नयाँ नोट चलनचल्तीमा, हात्तीसारमा जन्मिएको राम लक्ष्मणको चित्र हुने
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चितवनको हात्तीसारमा जन्मिएका राम लक्ष्मण नामक हात्तिको चित्र भएको रू. १००० को नयाँ नोट चलचलनमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलवार एक सूचनामार्फत नयाँ नोट बुधबारदेखि चलनचल्तीमा
साउन ७ गते, २०७७ १०:०८ मा प्रकाशित
आज कति छ सुनको मुल्य ?
काठमाडौं। सुनको मूल्य तोलामा चार सय रुपैयाँ बढेको छ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ७०० रुपैयाँ तोकिएको छ। हिजो यसको मूल्य ९२ हजार ३०० रुपैयाँ
साउन ६ गते, २०७७ ११:४२ मा प्रकाशित
नेप्से ८४ अङ्कले वृद्धि
काठमाडौँ। आइतबार सेयर बजारमा एक घण्टामै पोजिटिभ सर्किटसँगै दिनभरीका लागि कारोबार स्थगित भयो। कारोबार सुरु भएदेखि उच्च दरले उकालो लागेको नेप्से ४ मिनेट नहुँदै ४ प्रतिशतले नेप्से बढेसँगै पहिलो पटक
साउन ४ गते, २०७७ १५:०३ मा प्रकाशित
अब लघुवित्त खोल्न नपाइने, खुलेकाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि इजाजतपत्र स्थगित गरेको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले थप लघुवित्त सञ्चालनका लागि इजाजत नदिने घोषणा गर्दै प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरेको छ।
साउन २ गते, २०७७ १८:३७ मा प्रकाशित
कोरोना रहेसम्म एउटा बैङ्कको एटीएम अर्कोमा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्‍ने
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुनसुकै बैङ्कको एटीएमबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको सङ्कट कायम रहुन्जेल एउटा
साउन २ गते, २०७७ १६:३२ मा प्रकाशित
कर्जा तिर्ने म्याद ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म थप
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाको प्रभावमा परेका क्षेत्रहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न २०७७ असार मसान्त सम्मको अवधि रहेकोमा त्यसको म्याद ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म थपेको छ। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले
साउन २ गते, २०७७ १५:५३ मा प्रकाशित
लघुवित्तको लाइसेन्स रोक्का
काठमाडौँ। लघुवित्तको लाइसेन्स रोक्का गरिएको छ। निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको समेत लाइसेन्स रोक्का गरिएको हो। लघुवित्तहरूले दीर्घकालीन कोषहरुबाहेक अरु रकम ३ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म बैङ्कमा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था
साउन २ गते, २०७७ १५:४१ मा प्रकाशित